Apple inogona kutarisana nekirasi yekuita mhosva pamusoro pechikanganiso muApple Watch | Ndinobva mac
Pane dzimwe nhambo Apple yaifanirwa kutarisana nematare edzimhosva ekirasi ayo dzimwe nguva akasvika pakubudirira, kunyangwe mune vamwe, vashandisi vaifanira kutakura mutengo wekugadzirisa zvishandiso zvavo. Mavhiki mashoma apfuura takataura nezvematambudziko ayo izvo zviri kuitika mune butterfly mashandiro ayo Apple akagadzira ayo matsva MacBooks.
Iyo michina inogadzira makadhibhokisi akaonda uye nekudaro makomputa. Iyo ipfungwa yakanaka kwazvo, asi kune vamwe vashandisi haisi iyo yakanyanya kunaka nekuti vakatambura jamu mumakiyi anoita kuti vasakwanise kushandisa makomputa avo zvakajairika.
Chimwe chinhu chakafanana chave chiri kuitika nemhando dzakasiyana dzeiyo Apple Watch Uye ndezvekuti kubva kuZvikamu 0 zvikanganiso zvakatanga kuitika kuti mune dzimwe nguva Apple yakafukidza asi mune iyo nyaya iyo isu yatinoda kukuudza iwe kwete. Imwe yekutadza kwekutanga muApple Watch Yaive mune anodizing yealuminium uye ini ndaizoisiya iyo kubva kumashure iyo yakasimuka nedikita.
Zvakare pakanga paine matambudziko nemamwe Series 1 uye 2 mabhatiri, asi isu tanga tisati tamboona wachi dzichitambura kubva kuma screen disc. Kana isu tichitaura kuti vaive nema screen screen, ndeyekuti yaive yakakamurwa yakazara kutenderedza contour yayo kusiya mupendero waro wakanamatira kualuminium furemu yeawa uye mamwe ese akabatirira.
Apple inoziva nezvekukundikana uku mune mamwe mauniti asi haina kuda kupa ruoko rwayo kuti rimonyanise kuti idambudziko kuti zvese zviyero zvavanazvo pamusika zvinogona kutambura. Kunyange zvakadaro, Zvino zvinoita sekunge kudonha uku kuri kutora kukosha kwazvokana sezvo boka rakakura kwazvo revashandisi varikufunga kuendesa nyowani kirasi chiito mhosva.
Iyo detachment inogona kuve yakakonzerwa nekuti iyo nzvimbo pakati pezvinhu uye skrini mukati meApple Watch idiki zvekuti kunyangwe hazvo kuwanda kushoma kwekuwedzera kwemuviri webhatiri nekuda kwekupisa, kumanikidza kunoita kuti girazi ripatsanurike uye kumucheto kwechidzitiro kunoramba kwakanamatira uye skrini yakavharwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inogona kutarisana nekirasi yekuita mhosva pamusoro pechikanganiso muApple Watch
Zvakaitika kwandiri ne Series 0, ndakazvitora kuti ndigadzirise kunyangwe pazasi pevimbiso uye vakaitsiva ne Series 1 pasina dambudziko. Sekureva kwenyanzvi, chikonzero chaive chekuti, kuwedzera kwekupisa mubhatiri, izvo zvakakonzera kuti izvimbe uye ibvise iyo skrini.
Kune imwe SW yavanoziva uye vasingade kugadzirisa, yatokurukurwa mumaforamu uye yakakurukurwa nevashandi veApple: Ndezvekuti zviyeuchidzo zveBreathe application hazvishande (application yavanoshandisa zvakanyanya kushambadza… ..) , tarisa izvo zvaunoda asi hazvitaure kana kurangarira.
Ndine Apple Watch nhepfenyuro 1 uye iyo skrini inobuda, pandakaonana nehunyanzvi sevhisi (kuburikidza neinternet) vakandiudza kuti sezvo zvave nemakore anopfuura matatu vachazvitsiva neimwe nyowani asi kuti ine mutengo we € 3 pa «kugadzirisa bhatiri», hazvisi pachena kwandiri kuti kana vakafungidzira kutsiva chigumbuso chekugadzira vanokuchaja bhatiri nemutengo wakanaka.
Photo eraser, bvisa zvausingade kubva kumifananidzo yako